ठोस मोर्टार एकाइ - ठोस को निर्माण को लागि एक बोट। संयंत्र संग तुलना गर्दा फरक कन्फिगरेसन हुनेछ। तर, यो उपकरण संग संभव ठोस सबै ब्रान्डहरु उत्पादन हो। यो एक व्यक्ति केही स्थापनाको लागि प्रक्रिया संलग्न आवश्यक छैन। उपकरण विकल्प केही धेरै व्यञ्जनहरु को उपस्थिति सुझाव।
यस्तो कन्फिगरेसन यन्त्र मोबाइल वा स्थिर हुन सक्छ। उत्तरार्द्ध प्रकारको, एक क्लासिक मानिन्छ यसलाई उच्च उत्पादकत्व र दक्षता द्वारा विशेषता छ। सामान्यतया, यी एकाइहरु एक स्थानमा लगातार सञ्चालन मा संलग्न छन् जो उद्यम को अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ।
मोबाइल ठोस बोट उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ मा ठोस मध्यम मात्रा। यस्तो स्थापना कुशल र सामान्यतया कि फरक र टाढा ठाउँमा सञ्चालन निर्माण र व्यावसायिक संगठन को विशेषज्ञहरु द्वारा प्रयोग गरिएको छ। मोर्टार नोड्स प्रदर्शन गरेर पनि वर्गीकृत गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरूले कार्यहरु मा समान छन्। यो तपाईं पक्का हुन सक्छौं, केही मोडेल को तुलना थाह।
अन्य प्रतिष्ठानहरु यसको प्राविधिक विशेषताहरु छन्। उदाहरणका लागि, बनेको छ जो "BRU किरण-15G", को मोडेल विचार:
तरल additives र पानी सिमेन्ट औषधि;
एक नियन्त्रण प्यानल संग ठोस मिक्सर;
टाढाको नियन्त्रण संग grapple।
यो सेटिङ स्वचालित वा मार्गदर्शन मोड को नियन्त्रणमा काम गर्न सक्छन्। यस प्रकारका ठोस मोर्टार अपरेटर विधानसभा स्थापना वा अर्को व्यक्ति द्वारा स्वतन्त्र सामना गर्न सक्षम छ। उपकरण wherein तापमान -300 ° सी मा कम गर्न सकिन्छ फरक climatic अवस्था संग क्षेत्रहरु, प्रयोग गर्न सकिन्छ
विशेषताहरु बीच वर्णन घटक हाइलाइट गर्नुपर्छ:
समग्र भण्डारण क्षमता;
सिमेन्ट गोदाम क्षमता;
क्षमता लोड र उत्पादन;
कम तापमान मा सिस्टम हीटिंग;
ठोस र मोर्टार बोट जाडो समयमा एक क्षमता 15 देखि 20 मिटर3/ घन्टा लिएर, हुन सक्छ, यो आंकडा 10 मिटर3/ घन्टा। वेयरहाउस क्षमता एग्रिगेट र सिमेन्ट 200 मिटर3र 40 टन बराबर हो, क्रमशः कम गर्न सकिएन। हामी क्षमता लोड र उत्पादन बारे कुरा गर्दै भने, यी मापदण्डहरू क्रमशः 750 र 500 छन्। को ताप सिस्टम रूपमा बाफ सेटिङ प्रयोग गर्दछ। वजन 37.200 किलो हुँदा शक्ति उपकरण, 40 किलोवाट छ।
विनिर्देशों किरण-एकाइ 15G
एउटा उदाहरण, तपाईँ अझै अर्को ORM मान्न सकिन्छ। माथि उल्लेख गरिएको छ जो ठोस मोर्टार एकाइ, बराबर एक क्षमता छ 15 मिटर3/ घन्टा। अप3टुक्रा गर्न एग्रिगेट को अंश को संख्या, को सिमेन्ट गोदाम 24 मिटर3हुँदा। उपकरण 12 टन वजन र यसको स्थापना क्षमता 36 किलोवाट छ।
विशेषताहरु फिटिंग UBRS BRU-10
तपाईं मोबाईल ठोस बोट छनौट गर्ने निर्णय भने, तपाईं एक औषधि रूपमा मोडेल "UBRS BRU-10", जसको क्षमता 24 एम3/ घन्टा यो उपकरण ठोस मिक्सर प्रयोग गरिन्छ SB-146A, र कार्य विचार गर्नुपर्छ .:
सेन्सर संग सिमेन्ट औषधि र नियन्त्रक नियन्त्रण;
नियन्त्रक संग अक्रिय सामाग्री को औषधि।
कंक्रीट मोर्टार एकाइ विचार, तपाईं जो 200 मिटर3थप खुला र समग्र भण्डारण क्षमता, अनुरोध गर्नुपर्छ। सिमेन्ट गोदाम को क्षमता लागि, यो 40 मिटर3छ, तर रासायनिक additives को लागि आपूर्ति ट्यांक को क्षमता 1.5 मिटर3बराबर छ। आपूर्ति ट्यांक पानी पकड गर्न सक्छन् 3.5 मिटर 3। Dosing यो यांत्रिक स्थापना कैथोड मा प्रणाली, तर अनुपात को मोर्टार को र ठोस मिक्सहरू रूपमा निम्नानुसार: 0.65 /0र 5।
यो उपकरण बाफ दबाव वायवीय actuating सिस्टम को दबाव काम सादर रूपमा 68,6 kPa को स्तर को लागि, यो दायरा सक्नुहुन्छ 0.39 देखि 0.49 गर्न MPA। ईंन्धन ग्याँस प्रयोग गर्न सकिँदैन, वा डिजेल इन्धन र प्रवाह दर 102 ग्राम / भाप को किलो छ।
सुविधाहरू ठोस एकाइ समाधान ब्रान्ड FIBO INTERCON M2200
तपाईं उपकरण द्वारा वर्णन वस्तु खरिद गर्न निर्णय भने, तपाईं कंक्रीट मोर्टार एकाइ विदेशी उत्पादकहरु विचार गर्नुपर्छ। मोडेल माथि उल्लेख गरिएको छ। यो एक सामने धुरा र एग्रिगेट लागि शाखागत hoppers संग तीन एक्सल ट्रेलर आधारित छ। उत्तरार्द्ध रूपमा रोडा वा बालुवा रूपमा कार्य गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो शक्ति वर्ग लागि उपकरण दुनिया मा सबै भन्दा संकुचित एकाइ रूपमा कार्य। उपकरण presupposes:
मिश्रक को पानी ट्यांक;
रासायनिक additives आपूर्ति लागि वाहक पंप;
स्वचालित नियन्त्रण साथ उच्च दबाव क्लीनर।
पानी ट्यांक 500 लिटर राखिएको छ जबकि मिक्सर को मात्रा, 1,500 2,200 गर्न लिटर देखि भिन्न हुन सक्छ। यसलाई थप ताप र dosing सिस्टम विकल्प को एक समारोह छ।
पंप 160 किलोवाट एक दबाव मा संचालित एक volumetric dosing क्लीनर छ। यो भार को गणना, एक सहिष्णुता समय र नियन्त्रण dosing 25 व्यञ्जनहरु को स्वचालित नियन्त्रण छ किनभने यो कंक्रीट मोर्टार एकाइ बस छ संचालित। बालुवा चिस्यान समाधान द्वारा म्यानुअल समायोजित हुन सक्छ। आवश्यकताअनुसार डाउनलोड प्रोटोकल उत्पादन डायरी मा प्रदर्शित हुन्छ मुद्रण प्रोटोकल र इनभ्वाइसहरू बाहिर छ। उचाइ ओराल्नको 1120 मिमी छ।
आधुनिक मोबाइल ठोस बिरुवाहरु र ठोस र एकदम अक्सर को उत्पादन मा प्रयोग मोर्टार घटक। तिनीहरूले स्वयं काम गर्दा हासिल गर्न कठिन हुनेछ जो मिश्रण, एक ठूलो मात्रा प्रदान गर्नुहोस्। उपयुक्त इस्पात सामान्यतया यातायात को सुविधा प्रदान गर्दछ र cladding जाडो माउन्ट गर्नका लागि उपयुक्त छ जो एक फ्रेम छ। अतिरिक्त लाभ ट्यांक, Mixers र पंपों रूपमा उपकरण समावेश गर्नुहोस्। व्यवस्थापन कि लगभग पूर्ण मानव हस्तक्षेप समाप्त, स्वतः बाहिर छ।
साराटोभ मा Overalls। साराटोभ मा वेल्डिंग।
Boguchany HPP: निर्माण आयोजक, फोन, फोटो, बाढी क्षेत्र
जन्म अघि बच्चा तल वा सक्रिय calms? व्यवहार र लक्षण को सुविधाहरू
बर्तन मा JULIEN: सबै स्वाद को लागि व्यञ्जनहरु
'Valokardin': प्रयोगको लागि निर्देशन